Bilowga Hawl - Hagaajinta / Maaraynta Xiriirka -
Ka bilow Raadinta - Fiidiyoow
Demos & Bilawga Bilowga
Hawlaha & Raacitaanka
Warbixinnada iyo Dashboartooyinka
UTrons - Bilaw inaad bilowdid
login Saxiixa Hadda
Maareynta / Maaraynta Xiriirka
Eeg dhammaan wada-hadalka iyo macluumaadka goobta 1
Isku qor Email
Kala saaridda hoggaanka iyo iibsadaha rikoodhada
Tallaabooyinka degdegga ah
Goobaha Gaarka ah
Iskeelo Columns & Keydee Filters
Eeg dhammaan wada-hadalka iyo macluumaadka goobta 1 1 of 2
Ku dhaji Magaca xiriirka si aad u aragto dhammaan faahfaahinta, qoraalada, hawlaha, wada sheekeysiga, emails, diiwaanada la xidhiidha iwm. Goobta 1.
Waxaad arki kartaa dhaqdhaqaaqyadii hore. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa a note / wada hadalka / hawl ama la soo gudbiyo dukumentiyada la xidhiidha
Waxa kale oo aad arki kartaa macluumaadka xiriirka iyo diiwaanada la xidhiidha - dhammaan hal meel.
Waxaad isku dhejin kartaa emailkaaga si ay u wada sheekaysiga shirkadaha shirkadda CompanyHub si toos ah loogu dhejin doono shirkada CompanyHub CRM. Xitaa haddii aad dirto / hesho email ka baxsan shirkadda CompanyHub.
Baro Faahfaahin dheeraad ah: Sida loo Isku Qoro Email
Kala saaridda hoggaanka iyo iibsadaha rikoodhada 1 of 3
Tixgelinta Hoggaansanayaasha loo Qoondeeyo: Diiwaanka kasta wuxuu leeyahay 'Miisaaniyad' oo loo yaqaan 'Targeted To' taas oo muujinaysa cidda iibisa (ama diiwaan kasta oo kale) loo qoondeeyay. Marka la eego waxaa loo qoondeeyey qofka isticmaala / soo dejiya diiwaanka.
Haddii garoonka uusan muuqan foomka oo aad rabto inaad muujisid, waxaad u tegi kartaa Customize oo ka jiidi kartaa Qeybta Qarsoon ee hoose ilaa qayb kale.
Kala saaridda hoggaanka iyo iibsadaha rikoodhada 2 of 3
Haddii aragtida Shirkadaha / Shirkadaha / Shirkadaha loo qoondeeyey dadweynaha (default default public), diiwaanada oo dhan waa la arki karaa dhammaan. Waxaad bedeli kartaa goobta xuduudaha ku saleysan. Xaaladdaas, diiwaanka waxaa loo arki doonaa iibiyaha, maamulaha, maamulaha maamulaha iyo wixii la mid ah.
Wax badan ka baro: Xakamaynta Xogta Macluumaadka
Kala saaridda hoggaanka iyo iibsadaha rikoodhada 3 of 3
Qodobka ugu sareeya waxaa go'aaminaya siyaabo kala duwan. Waxaa la dejiyaa iyada oo la adeegsanayo 'Warbixinno' oo ku saabsan 'Profile of Profile'. Marka la eego, warbixinta isticmaalaha waxaa loo gudbiyaa maamulaha iyo maamulaha maamulaha madaxa shirkada.
Haddii aad rabto in aad leedahay shuruucda aragtidaada sida ku saleysan alaabta, Dalalka, Warshadaha iwm, taas oo macquul ah. La xiriir taageerada waxayna ku caawin doonaan.
Shaqaaleeyayaasha waxay neceb yihiin CRMs sababtoo ah waxay qaadanayaan waqti. Sidaa daraadeed waxaanu u fududeynay inay si deg deg ah u cusbooneysiiyaan CRM si ay waqti badan u qaataan iibinta!
Baro Faahfaahin dheeraad ah: Customize Quick Fields Fields
Goobaha Gaarka ah 1 of 2
Waxaad la socon kartaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay meheradaha gaarka ah. Sida Warshadaha, Taariikhda Cusbooneysiinta, source, Income, Products iwm
Waxaad abuuri kartaa noocyo noocyo kala duwan sida Text, Lacagta, Number, Taariikhda, fursadaha Select, Total, formula, Isku duwo rikood kale iwm
Baro Faahfaahin dheeraad ah: Customize Fields
Goobaha Gaarka ah 2 of 2
Meelahan waxaa laga heli karaa meel kasta - Filters, Forms, Reports, Ogolaansho Muuqaal iwm. Waxaad kaloo xakamayn kartaa cida arki karta / bedeli kartaa meelaha ayadoo loo habaynayo oggolaanshaha fasaxa.
Iskeelo Columns & Keydee Filters 1 of 2
Si fudud ayaad u bedeli kartaa tiirarka.
Baro Faahfaahin dheeraad ah: Filters
Iskeelo Columns & Keydee Filters 2 of 2
Waxaad si sahlan u xaddidi kartaa diiwaanada ku saleysan nooc kasta sida iibka, waddanka, taariikhda xigta ee soo socota iwm. Waxa kale oo aad kaydin kartaa shaandhooyinkan.
Nala soo dir qaar ka mid ah jawaab celinta!
Nala soo dir qaar ka mid ah jawaab celinta
U dir celinta
Waad ku mahadsantahay jawaab celintaada qiimaha leh